I-Huawei Watch GT3 iwukungcweliswa kwefomula eyimpumelelo [Ukuhlaziya] | Izindaba Zegajethi
IHuawei Watch GT3 iwukungcweliswa kwefomula eyimpumelelo [Ukuhlaziya]
UMiguel Hernandez | 01/12/2021 09:00 | Kubuyekezwe ku- 27/11/2021 16:55 | Gadgets, General, Izibuyekezo, SmartWatch
Izinto ezigqokwayo zisemfashinini, naphezu kweqiniso lokuthi azizange ziqede ukuqala, eminyakeni yamuva nje, naphezu kokumiswa okubangelwa ubhubhane, lawa mawashi ahlakaniphile asethandwa kakhulu ngenxa yokusebenza kwawo okungenakubalwa kanye nokwenza ngcono ukusebenza kwawo. Esimweni esinjalo UHuawei usenesikhathi eside enikeza ezinye zezinketho ezinhle kakhulu endaweni yama-smartwatches, futhi izoqhubeka injalo.
Sihlaziya i-Huawei Watch GT 3 entsha efakwe njengokuthuthukiswa kwenguqulo yangaphambilini futhi igcina ukuzibophezela kwayo okuqinile ku-Harmony OS. Sihlaziya iwashi elihlakaniphile lakamuva nelinamandla kakhulu le-Huawei kuze kube manje, thola nathi.
1 Idizayini ebonakalayo neyimpumelelo
3 Izinzwa nokuhlukahluka kokusetshenziswa
4 Ukuqeqeshwa, ukusetshenziswa kanye nokuzimela
Idizayini ebonakalayo neyimpumelelo
Kulokhu i-Huawei ayifuni ukuphuma kuma-canon ayo mayelana newashi elihlakaniphile, igcina isici sewashi lendabuko kude nalokho okufunwa ezinye izinhlobo ezifana ne-Apple ne-Xiaomi. Sinamabhokisi amabili, 42,3 x 10,2 millimeters kanye 46 x 10,2 millimeters kuye ngezidingo zethu. Iwashi lizoba nesisindo esingamagremu angu-35/43 ngaphandle kwebhande, futhi izwakala icwengekile futhi yakhiwe kahle, kanye nokuba yisiko lomkhiqizo waseShayina. Endabeni yemodeli ehlaziywe, ihlanganisa ibhande lesikhumba elinsundu kanye nekesi lensimbi engagqwali kumbala wayo wemvelo, omuhle futhi oguquguqukayo.
Izinguqulo: 42 futhi 46 millimeters, bendabuko kanye «ezemidlalo»
Imibala: Igolide, Rose Gold, Steel kanye Black.
Imichilo: I-Milanese, i-silicone, isikhumba nensimbi.
I-Ceramic enamathela ngemuva
Mayelana nalokhu, sesivele sazi ukuthi sinenguqulo enesandla sesibili kufreyimu noma yendabuko kuye ngokuthi imodeli ekhethiwe kanye nobukhulu besikrini. Kufanele kukhulunywe, ukuze kungadideki umfundi, ukuthi sihlaziya inguqulo engamamilimitha angu-46 ngebhande lesikhumba elinsundu kanye nekheshi lendabuko elinombala wensimbi. Ngokombono wami, iwashi ligcina izilinganiso ezinhle, umklamo ongaguquki kanye nomuzwa wokuguquguquka kanye nobuhle obubalulekile, ingakuphelezela emcimbini osemthethweni nasejimini, into okufanele uyikhumbule lapho wenza ukukhokhelwa kwalezi zici.
Kulokhu, uHuawei ukhethe i-ARM Cortex-M, ngaphandle kokwenza ngale ndlela amaphrosesa wokuzenzela lawo esiwazi kakhulu. Lezi yizindaba ezinhle ngoba ziqhakambisa ukusebenzisana kweHarmony OS, kodwa kusenza sizibuze ngekusasa lamaphrosesa ohlobo lwase-Asia. Ngokuqondene nenkumbulo ye-RAM asinalo ulwazi oluqondile, sinalo mayelana ne-4 GB yengqikithi yesitoreji, eyaziwa kangcono ngokuthi «ROM».
Imakrofoni ehlanganisiwe yokuthatha izingcingo
Sinewashi elinokuxhumana I-WiFi yesizukulwane sesi-5.2 kanye ne-Bluetooth XNUMX ngakho-ke sinebanga elibanzi lamathuba angenantambo. Asinaso lesi sikhathi (yebo kumodeli edlule) lithuba lokuhlanganisa i-eSIM noma ikhadi le-SIM elibonakalayo, ngakho-ke uzoba nokuncika ngokuphelele ocingweni. Idivayisi iyahambisana ne-Harmony OS, i-Android 6.0 kuya phambili kanye ne-iOS 9.0 kuya phambili, okuyenza ibe enye indlela eguquguqukayo, nokho, engeke isivumele ukuthi sihlanganyele nezaziso ngaphandle kwe-Huawei / Honor kalula futhi ngokushesha. .
Izinzwa nokuhlukahluka kokusetshenziswa
CKungenzeka kanjani ukuthi kube ngenye indlela, le Huawei Watch GT 3 idla ifa lezinzwa eziningi ezinhle, ngale kweziqapha zokushaya kwenhliziyo zakudala namamitha okugcwala komoyampilo egazini, uHuawei ubefuna ukushintsha le Watch GT 3 ibe enye yezemidlalo ngaphandle kokulahlekelwa lutho, kukho konke lokhu okulandelayo kuzosiphelezela :
Inzwa yezinga lokushisa lomzimba (izosebenza kusibuyekezo esizayo).
Inzwa yokucindezela komoya (i-barometer).
Konke lokhu ngaphezu kwesistimu yokulinganisa enembile yendawo lapho i- I-GPS, i-GLONASS, i-Galileo kanye ne-QZSS kuzo zonke izinguqulo zayo. Izici zobuchwepheshe ngale kwesikrini nokuzimela kwabelwana ngosayizi abahlukene nezinguqulo. Futhi ngaleyo ndlela siqhubekela phambili ekukhulumeni ngesikrini.
Inguqulo engamamilimitha angu-46 (ihloliwe) inephaneli I-AMOLED de 1,43 amayintshi amele ukukhula kancane uma kuqhathaniswa nenguqulo yangaphambilini, ngokulungiswa okungu-466 × 466 ngaleyo ndlela kunikeza ukuminyana kwephikseli okungu-326PPI. Ngakolunye uhlangothi, sinesinqumo esifanayo enguqulweni yamamilimitha angu-42, ngakho-ke ukuminyana kwephikseli kukhuphukela ku-352PPI, imininingwane ngokubuka kwethu ingabonakali phakathi kwenguqulo eyodwa nenye.
Ukuqeqeshwa, ukusetshenziswa kanye nokuzimela
Mayelana nokwenza ngokwezifiso ngaphakathi kwe I-AppGallery sithola uhlelo lukaHuawei ama-sphere angaphezu kuka-10.000 alandekayo, Iningi likhululekile, okuzokwenza kube nzima ukuthi ungamtholi oyithandayo. Ine-bezel ejikelezayo ethuthukisiwe, kanye nephrofayela yenkinobho yokusebenzisana manje esinokuthinta okunethezekile kanye nohambo ngokubuka kwethu.
Kulesi sigaba uHuawei usithembisa nge-TrueSeen 5.0+ ukunemba okukhulu ezilinganisweni zokuqeqesha, futhi iqiniso liwukuthi ukuhlola kwethu kube kuhle, okubonisa imiphumela efana nezinye izindlela ezisezingeni eliphezulu njenge-Apple Watch noma i-Galaxy Watch, konke sibonga izitholi zayo eziyisishiyagalombili zezithombe.
Intuthuko ye-algorithm ye-AI enomkhawulo wokuchezuka ongu-5LPM.
Izaziso mayelana nokushaya kwenhliziyo okungajwayelekile.
Umsizi wezwi ohlanganisiwe.
Ngaphandle kokusinika idatha enembile ku-mAh, inkampani yase-Asia isithembise izinsuku eziyi-14 zokuzimela esingakwazi ukukufeza, sihleli phakathi kwezinsuku eziyi-11 neziyi-12 ngokusetshenziswa okuvamile. Ezicini eziningi ezinjengohlelo lokusebenza nokuphathwa kwedatha, ukusebenzelana komsebenzisi kanye nolwazi lwethu olujwayelekile ngakho, iwashi alinikezanga umehluko omkhulu ngenguqulo yalo yangaphambilini, futhi leli yiphuzu elihle impela uma sicabangela ukuthi aphelelisiwe. Konke lokhu kufinyezwa ngentengo kusuka kuma-euro angama-249 enguqulweni engamamilimitha angama-46 kanye nama-euro angama-229 enguqulo engamamilimitha angama-42, Izintengo ezilungiswe ngokunamandla ngokusekelwe emandleni azo, ikakhulukazi ukulungisa isilinganiso senani lekhwalithi okunzima ukulifanisa emkhakheni. Ku-329 sizoba nenguqulo ye-titanium okungaziwa ukuba khona kwayo e-Spain okwamanje.
Kuthunyelwe ku: December 1 we-2021
Ukulungiswa kokugcina: Novemba 27 we-2021
Idizayini ecwenge kakhulu
Igcwele ubuchwepheshe nezinye izindlela, ngaphandle kokuntuleka kwezinzwa
Intengo eqine kakhulu
Kufanele sijwayele i-bezel ejikelezayo
I-interface yomsebenzisi inoveli kangangokuthi idinga ukufunda
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Gadgets » IHuawei Watch GT3 iwukungcweliswa kwefomula eyimpumelelo [Ukuhlaziya]
I-Tesvor S4, isicoci se-robot vacuum esiphelele sebanga eliphakathi [Buyekeza]
I-Starkvind iyifomula ye-IKEA yokuqamba kabusha izihlanzi zomoya [Ukuhlaziya]